Mana Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa: ‘Ibsi Lubni Balaay kennuuf jedhan beekkamtii hin qabu’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMana Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa: ‘Ibsi Lubni Balaay kennuuf jedhan beekkamtii hin qabu’
Manni Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa isa Luba Balaay Mokonniin Mana Lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa hundeessina jedhan irratti deebii kenne.
(bbcafaanoromoo)—Mana Lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Hogganaa Itti – aanaa kan ta’an Ri’isa Dabra Mahaari Haayiluu ibsi Luba Balaay kennuuf jedhan beekkamtii hin qabu jechuun mootummaan gidduu haa seenu jechuun gaafatan.
“Gaaffii dhiyeessun mirga ta’ullee dursa mari’achuun ni barbaachisa,” jedhaniiru.
Mana lubummaa Ortodoksii akka hundaa’uf yaadame
”Sinodosiin murtaa’ee erga hordoftoonni itti amanani booda gaaffiin dhiyaachuu qaba. Yoo akkas ta’e malee rakkootu uumama,” jechuun gaaffichi gama Luba Balaayiin ka’uunsaa adeemsa ykn caaseffamaan ala ta’u himan.
Ta’us Manni Amantaa Ortodoksii Itoophiyaa, “Ibsichi Sinodoosiin beekkamtiin waan itti hin kennamneef mootummaan tarkaanfii akka fudhatu barbaadna,” jedhaniiru.
‘Bataskaanni wanta akkanaa kana balaaleffachuu qabdi’
Dabalataan, “yaada caasaa mana amantaa keenyaa ala ta’e dha” kan jedhan Ri’isa Dabra Mahaari Haayilu hordoftootni amantichaa dhimmicha tasgabba’anii akka hordofan gaafatan.
Kaayyoo Mana Lubummaafi deebii Mana Amantaa
Luba Balaay Mokonniin akka jedhanitti Mannii Lubummaa hundaa’u kan Sinodosii Mana Amantaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa adda bahu miti.
Sababa barbaachiseefis yoo dubbatan, “Kaayyoon keenya Ooromoon mana amantaa kana keessatti of ilaaluu qabaadha. Aadaasaa, duudhaasaafi afaansaa dabalatee jechuudha. Kan amma duraa ‘simaabelewudha,” jedhan.
Manni amantichaafi Oromummaan walsimee deemuu qaba jechuun malaammaltummaafi gartummaan sanyii irratti hundaa’ellee jira jedhanii turan.
Dhimma kana irratti deebii kan kennan Ri’iisa Dabra Mahaari Haayilu Manni Amantaa Ortodoksii lafa hin weerartu, loogin eenyummaa bu’ureeffates hin jiru jedhan.
Abbootiin amantaa ibsicharratti hirmaatan dhimma kana Luba Balaay walin mari’annee ni furra jechuun himan.
Kana malees, Phaaphaasotni dhalattoota Oromoo ta’an 11 miseensa Sinodosii ta’uun hojjechaa akka jiranis ibsicharratti himameera.
“Mana amantichaa keessatti wanti dhoksaadhaan hojjetame hin jiru,” kan jedhan abbootiin amantaa ibsicha kennan “gocha Luba Balaay mootummaan hatattamaan akka nuuf dhaabsisu barbaadna,” jedhan.
Gaaffiin ummatni Oromoo afaan isaatin tajaajilamuu qaba jedhu sirrii ta’u abbootin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa gaafichi gama Luba Balaayiin ka’uunsaa adeemsa ykn caaseffamaan ala ta’uu himaniiru.